Jizọs Agwọọ Mmadụ n’Ụbọchị Izu Ike | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
Jizọs Agwọọ Mmadụ n’Ụbọchị Izu Ike
Ndị Farisii kpọrọ Jizọs asị ma na-achọ ihe ha ga-eji maka ya jide ya. Ha kwuru na o kwesịghị ịgwọ mmadụ n’Ụbọchị Izu Ike. N’otu Ụbọchị Izu Ike, Jizọs hụrụ otu nwoke kpuru ìsì ka ọ na-arịọ arịrịọ. Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: ‘Unu ga-ahụ otú m ga-esi eji ike Chineke gwọọ nwoke a.’ Jizọs ji ọnụ mmiri ya gwọọ ụrọ, ma tee nwoke ahụ n’anya. Jizọs gwara ya, sị: ‘Gaa saa anya gị n’ọdọ mmiri Siloam.’ Nwoke ahụ mere ihe a Jizọs gwara ya, ma hụwa ụzọ. Nke a bụ nke mbụ ọ na-ahụ ụzọ kemgbe a mụrụ ya.
Ihe a juru ndị mmadụ anya. Ha kwuru, sị: ‘Onye a ọ́ bụghị nwoke ahụ nke na-anọ otu ebe arịọ arịrịọ, ka ọ̀ bụ onye yiri ya?’ Nwoke ahụ gwara ha, sị: ‘Ọ bụ m bụ nwoke ahụ kpuru ìsì kemgbe a mụrụ ya.’ Ha jụrụ ya, sị: ‘Gịnịzi mere i ji ahụ ụzọ?’ Mgbe ọ gwara ha ihe mere o jizi na-ahụ ụzọ, ha kpọọrọ ya gakwuru ndị Farisii.
Nwoke ahụ gwara ndị Farisii, sị: ‘Jizọs ji ụrọ tee m n’anya, sị m gaa saa anya m ná mmiri. M mere ihe ọ gwara m, ugbu a, m na-ahụzi ụzọ.’ Ndị Farisii kwuru, sị: ‘Ọ bụrụ na Jizọs na-agwọ mmadụ n’Ụbọchị Izu Ike, ọ bụghị Chineke nyere ya ikike.’ Ma, ndị ọzọ sịrị: ‘Ọ bụrụ na ọ bụghị Chineke nyere ya ikike, ọ gaghị agwọli mmadụ.’
Ndị Farisii kpọrọ nne na nna nwoke ahụ kpuru ìsì ma jụọ ha, sị: ‘Olee otú nwa unu si hụwa ụzọ?’ Ụjọ tụrụ ndị mụrụ ya n’ihi na ndị Farisii kwuru na a ga-achụpụ onye ọ bụla kweere na Jizọs n’ụlọ nzukọ. Ha gwara ndị Farisii, sị: ‘Anyị amaghị. Jụọnụ ya.’ Ndị Farisii jụwakwara nwoke ahụ ajụjụ ọzọ, ya asị ha: ‘Agwala m unu ihe niile m ma. Gịnị mere unu ji ka na-ajụ m?’ Ihe a o kwuru were ndị Farisii iwe, ha akwapụ ya n’èzí.
Jizọs gara chọọ nwoke ahụ ma jụọ ya, sị: ‘Ì nwere okwukwe n’ebe Mezaya nọ?’ Nwoke ahụ zara ya, sị: ‘M ga-enwe ma m mata onye ọ bụ.’ Jizọs gwara ya, sị: ‘Ọ bụ m bụ Mezaya ahụ.’ Ihe a Jizọs gwara nwoke a, ò gosighị na Jizọs dị obiọma? Ọ bụghị naanị na Jizọs mere ka nwoke ahụ hụwa ụzọ, kama, o mekwara ka o nwee okwukwe.
“Unu ehiewo ụzọ, n’ihi na unu amaghị Akwụkwọ Nsọ, unu amaghịkwa ike nke Chineke.”​—⁠Matiu 22:29
Ajụjụ: Olee otú Jizọs si nyere nwoke ahụ kpuru ìsì aka? Gịnị mere ndị Farisii ji kpọọ Jizọs asị?
Ndị na-eso ụzọ Jizọs jụrụ ya ihe mere nwoke a ji kpuo ìsì. Ò mehiere? Ndị mụrụ ya hà mehiere? Ihe ndị mmadụ kwuru mgbe Jizọs gwọrọ nwoke a dị iche iche.
Ihe nwoke ahụ kpuburu ìsì kwuru were ndị Farisii iwe. Ha chụpụrụ ya n’ụlọ nzukọ, bụ́ ihe ndị mụrụ ya tụrụ ụjọ ya.
‘N’ezie Chineke Mere Ya Onyenwe Anyị na Kraịst’ (Nke Abụọ)